Maqaalka Abhay Singhal ee Martech Zone |
Maqaallada by Abhay Singhal
Abhay waa aasaasaha iyo CRO ee InMobi. Abhay wuxuu adduunka oo dhan uga hadlaa ganacsiga, dadka, iyo dhaqanka wuxuuna door muhiim ah kahelay helitaanka aqoonsiga InMobi sida 50 Shirkadaha ugu Qaska Badan Caalamka by MIT Review, Bilawga ugu wanaagsan ee sanadka ee abaalmarinta Forbes iyo kuwa kaloo badan. Jacaylka uu u qabo hal-abuurnimada ayaa u qaaday Machadka Tiknoolajiyadda Hindiya, Kanpur (IIT) bachelorkiisa halka sanadkii 2013 sidoo kale lagu sharfay 'Abaal-marinta Buugga Kala-duwanaanta' ee uu ku fiicnaado ganacsiga.
Khamiista, Febraayo 23, 2017 Khamiista, Febraayo 23, 2017 Abhay Singhal
Sannadkii 2016-ka, Shiinaha wuxuu ka mid ahaa suuqyada ugu adag, soo jiidashada badan isla markaana ku xiran kumbuyuutarrada adduunka, laakiin maaddaama adduunku uu ku sii socdo isku xirnaanta, fursadaha ka jira Shiinaha waxaa laga yaabaa inay noqdaan kuwa ay heli karaan shirkadaha caalamiga ah. App Annie ayaa dhowaan soo saartay warbixin ku saabsan xawaaraha moobiilka, taasoo muujineysa Shiinaha oo ah mid ka mid ah darawalada ugu waaweyn ee koritaanka dakhliga dukaanka barnaamijka. Dhanka kale, Maamulka Cyberspace ee Shiinaha ayaa amar ku bixiyay in dukaamada barnaamijyadu ay iska diiwaangeliyaan dowladda